Orthophoto: ihe ọ bụ, njirimara ya na ihe ọ bụ maka | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọchịchọ na-eto eto ịmara banyere mbara ala emeela ka ụmụ mmadụ chọpụta ụzọ ọhụrụ iji weghara ókèala ahụ. Shapesdị ndị a na-anwa ịnọchite anya elu ụwa site na ozi ziri ezi nke enwere ike ịnweta site na teknụzụ. Ejirila usoro dị iche iche iji mezuo nzube ndị a. Themfọdụ n’ime ha bụ orthophoto. Ọ bụ ụdị usoro fotommetric nke dabere na iji ihe mkpuchi foto nke enwetara site na ụgbọ elu ndị nwere igwe ikuku pụrụ iche. Foto a na - eweta usoro niile ịme eserese na atụmatụ dị iche iche nke ọtụtụ ndị ọrụ na-eji.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe orthophoto bụ, kedụ njirimara ya na etu ha si dị mkpa.
1 Kedu ihe bụ orthophoto
3 Ojiji nke orthophoto
4 Akụkụ nke ihe ndị sitere n'okike
Kedu ihe bụ orthophoto
Dị ka anyị kwurula na mbụ, e nwere ụgbọelu ndị nwere kamera ikuku pụrụ iche iji see ụwa elu. Ihe mkpuchi foto ndị a sitere na usoro ịbịaru atụmatụ na akpịrịkpa dị iche iche emere maka ọtụtụ ebumnuche. Na mgbakwunye na ihe nlereanya a maka inweta foto ikuku, a na-eme orthophotos dị iche iche nke egosipụtara n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Ihe mkpuchi fotommetric zara na kwesịrị inwe ike idozi ọtụtụ nsogbu nke mbara ala. Nke a bụ otu ụdị kachasị dị mma iji gosipụta ezigbo oghere dị ma nyere aka dozie nsogbu sitere na ụlọ ọrụ ọkachamara.
Ojiji nke orthophoto a na-agbasawanye na ngalaba ọkachamara nke ngalaba niile metụtara sayensị ụwa. Alizationghọta usoro ọdịnala na itinye ya n'ọrụ na mmepe mmekọrịta ọha na eze nke mba nwere nnukwu mmasị. Ma ọ bụ ekele maka ụdị ozi a ka a ga-enwe afọ ojuju maka mkpa ọmụmụ, atụmatụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọkachamara.
Ọkpụkpụ foto bụ foto foto nke mbara ala nke ntụgharị etiti ya gbanwere ka ọ bụrụ usoro orthogonal. N'ụzọ dị otú a, na ngbanwe a, ọ ga-ekwe omume iwepụ ihe mgbagwoju anya niile nke atụmatụ igwefoto ikuku. Enwekwara mgbagwoju anya dị iche iche site na nchupu nke enyemaka ahụ. Nke a na - ewepu mgbanwe dị iche iche dị na etiti anaghị edozi. Ọdịiche ndị a bụ n'ihi ọdịiche dị na ọkwa nke foto eserese na ọchịchọ nke igwefoto nwere ike ịnwe n'oge ịse foto.
Ekele maka usoro a nke inweta ozi, enwere ike nweta otu na ọnụ ọgụgụ zuru oke maka ogo dum nke orthophoto. Iji gbanwee ntụgharị uche dị na orthogonal ọzọ, nke bara uru, a na-eji usoro a na-akpọ mmezi. Ọ bụ usoro na-anwa imezi ọdịiche dị na mkpọda nke ala na-eweta yana ogo nke igwefoto gbasara mbara ala. Ọ bụrụ na ọdịiche a dị ịrịba ama, ndozi dị maka idozi usoro stereoscopic site na akara elementrị dịka enweghị ike nke mbara ala ahụ.
Ozugbo enwetara ozi a, gaa orthophoto a na-agbakwunye ozi altimetry, grid UTM na toponymy. Ihe mgbapụta nke orthophoto bụ orthophotoplane. Ọ bụ mpaghara mepere emepe nke a na-agbakwunye toponymy na ụfọdụ akara ngosi na ntanetị. Ọ na-abụkarị ihe ịchọpụta ihe niile gbasara ime obodo mepere emepe.
Ojiji nke orthophoto
Enwere ike iji ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ niile ebe ịchọrọ foto ikuku na usoro ma ọ bụ nkewa oge niile. Uru nke orthophoto bụ na ọ nwere ike nweta oke ziri ezi nke na-enye ohere ka a na-eme ọmụmụ ihe ọmụmụ n'ụzọ dị mfe. Enwere ike ijikọ ihe ọmụmụ ndị a na atụmatụ mmekọrịta akụ na ụba ndị ọzọ na mpaghara.
Ọzọ uru ndị ọzọ nke orthophotography na-enye bụ na ọ nwere ike ịme ntọala nke efere ma ọ bụ teepu nchekwa data magnet. N'ihi nke a, ọ ga-ekwe omume ịkọkọta nchịkọta ọnụ ọgụgụ nke nwere ike idekọ mgbanwe niile mpaghara ụfọdụ agbanweela oge. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịnweta ozi ọ bụghị naanị maka enyemaka dị ugbu a kamakwa banyere mgbanwe nke nwegoro oge.
N'ọtụtụ mba, arụpụtala ihe dị mma site na itinye akwụkwọ ọdịnala. Okwesiri ikwusi na enwere atumatu ndu obodo enwere ihe karịrị 12.000 orthophotos na akpịrịkpa dị iche iche. Na United States, a na-eji orthophotos emeju ihe niile na map ma nweta ozi ndị ọzọ. Enwekwara ike iji ya nweta data gbasara inwe ma ọ bụ njirimara ala. Enwere ike iji Orthophotos kewaa ihe dị iche iche ala nwere ike inwe, ma ọ bụ ọrụ ugbo, ọhịa ma ọ bụ obodo mepere emepe, na ndị ọzọ.
Otu n'ime ojiji nke orthophotos anyị na-ahụ na ọkàiwu. Na mgbakwunye, iji ozi a maka ebumnuche ndị ọzọ dịka ịhazi na ịhazi mpaghara dị anya. N'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ nwere ike ịkwado ozi enwetara site na eserese, enwere ike iji ya melite nchebe ọha na njikwa okporo ụzọ ma ọ bụ, nchekwa mpaghara ọkụ, ndị mmanye iwu nyere aka, O nwere ebumnuche dị iche iche nke ịba uru ọha, na-achịkwa ala na ihe onwunwe ya na ire nke akụrụngwa na atụmatụ nwere ike ịmekọrịta maka ekele orthophoto.
Akụkụ nke ihe ndị sitere n'okike
Otu n'ime ebe iji orthophoto bụ nke zuru ebe niile bụ na akụ ndị sitere n'okike. Centerslọ ọrụ ihe ọmụma sitere n'okike, ụlọ ọrụ oke ohia, na ụlọ ọrụ dị iche iche na-eji Orthophotos enweta ihe ọmụma banyere akụ ndị sitere n'okike. Ejikwala ya maka mmepe akụkọ ihe mere eme banyere iji ala, ojiji ala niile, yana njirimara ihe ọkụkụ.
Ha nwere ike mụọ ahịhịa ahịhịa juru na ala ahịhịa juru ma ọ bụ mee nchọpụta phytosanitary nke ihe ọkụkụ ụfọdụ. A na-ekpebikwa ọtụtụ usoro ntụgharị ihe ọkụkụ site na ọmụmụ site na iji orthophotos. N'ikpeazụ, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ na o nwere ngwa maka atụmatụ na ịkọ amụma nke mkpụrụ, ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ nke ihe ọkụkụ, nrigbu ala na-adịghị mma na ọmụmụ dị iche iche maka oke ala.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere orthophoto na ojiji ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Orthophoto